အကယ်၍သင်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ် ၂၀ အတွင်းမည်သည့်ဘရောက်ဇာဂိမ်းကိုမဆိုကစားခဲ့ဖူးပါကသင်သည်ဧကန်အမှန်အသစ်ကစတူဒီယိုများမှထုတ်လုပ်သောအနည်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးလာသည်။ သူတို့ကဤမျှလောက်များစွာသောခေါင်းစဉ်များအတွက်ကျော်ကြားပါတယ်,ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကသူတို့ကကန့်သတ်မယ့်မှာရရှိနိုင်နည်းပညာကိုအသုံးပြုပုံကျော်ကြားဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအမြဲတီထွင်ဖန်တီးမှုမှတဆင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်တွန်းဖွင့်,ယခုသူတို့မကြာသေးမီကဖြန့်ချိစီမံကိန်းများနှင့်အတူခေတ်ရေစီးကြောင်းဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။, သို့သော်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အသိပညာအမြဲအခြားမှတဦးတည်းနယ်ပယ်မှစီးဆင်းသောကွောငျ့,သူတို့အသစ်မှာခေတ်ရေစီးကြောင်းဂိမ်းကစားကမ္ဘာတွင်လုပ်မယ့်တိုးတက်မှုကိုလျင်မြန်စွာအချို့ညစ်ညမ်းဂိမ်းဖန်တီးသူများအားဖြင့်အဆင်ပြေအောင်ခဲ့သည်,ပဲပန်းသီးနှင့်အမြဲတမ်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေအသစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးချေးလိုပဲ.
ဒီမှာအလုပ်ထွက်ရိုးရှင်းခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကြီးခေတ်ရေစီးကြောင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲကုမ္ပဏီကနေထုတ်ပြီးဒီဆိုဒ်အသစ်မှာအားလုံးစုပြီးပုံစံတူဖန်တီးထားတဲ့ဂိမ်းတွေကိုရှာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ကြောင့်အခမဲ့အသစ်ကလိင်ဂိမ်းများကိုခေါ်နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးထက်ပိုသောအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်အေးမြအသံအမည်များနှင့်အတူသွားကြပြီနိုင်ပေမယ့်ကျနော်တို့ဧည့်သည်သူသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အမည်ကိုမြင်ယခုအချိန်တွင်ထံမှပူဇော်သက္ကာဘို့နေတာကိုအကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုသိရန်ရှိပါတယ်တူသောခံစားကြရသည်။ အဲဒီထက်ပိုသိသာအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ နှင့်ဟုတ်ကဲ့,ဂိမ်းများအမှန်ပင်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။, သူတို့အားလုံးသည်သင်၏ဘရောက်ဇာတွင်တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုကစားနိုင်ပြီး၎င်းသည်သင်အသုံးပြုနေသောကိရိယာအားလုံးတွင်အရေးမကြီးပါ။ အဆိုပါဂိမ်းအန်းဒရွိုက်နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးအပေါ်ဿုံပြေး,ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှေ့တော်၌ထိုသူတို့ကိုစမ်းသပ်အဖြစ်,ကျနော်တို့တရားဝင်ဆိုက်စတင်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏စုဆောင်းမှုနှင့်အတူ,သင်ရုပ်ရှင်များသို့မဟုတ်မည်သည့်အခြားညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းဆိုက်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့မဆိုအခြားအခမဲ့လိင်ပြွန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အလွယ်တကူပျင်းစရာရတဲ့မရှိဘဲအကြိမ်ပေါင်းများစွာကစားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်သောဂိမ်းနာရီပေါင်းများစွာရှိသည်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာဤဂိမ်းအချို့ဇာတ်ကောင်အဘို့ဤမျှလောက်စိတ်ကြိုက်နှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်နှစ်ခုကစားသမားဖြစ်နိုင်သည်တူညီတဲ့ဂိမ်းအတွေ့အကြုံရှိသည်မဟုတ်နိုင်ကြောင်းကိုသင်၏စိတ်ကူးယဉ်ကျော်ဤမျှလောက်ထိန်းချုပ်မှု။ ဤသည်မှာအများအားဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာဂိမ်းများတွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားဂိမ်းစတိုင်များစွာရှိသည်။, သငျသညျအသကျရှငျနှင့်အံ့သြဖွယ်လိင်ဘဝချင်တယ်ဆိုရင်ယင်းသို့မဟုတ်ပင်ကလပ်အသင်းအတွက်ထွက်ထိ၊ရုပ်ပြောင်ရတဲ့၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျသွားသို့မဟုတ်ပင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားစတင်၊သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏ချိန်းတွေ့။ သင်ပင်လိင်တူချစ်သူချိန်းတွေ့ခကျြကိုခံစားနိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပင်သင်လိင်တူချစ်သူဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ချိန်းတွေ့ခကျြရှိသည်။
တကယ္လို႔ သင္တို႔ရဲ႕ဆိုဒ္မွာေတြ႔ရတဲ႔အခါတကယ္ဂိမ္းကစားေနသလိုခံစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ေဆာ့၀ဲကိုစစ္ေဆးၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဤရွေ့ကားကြံ့လိင်ဂိမ်းစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အောင်မြင်မှုများ၏ပုံစံအတွက်ဤမျှလောက်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ အဆိုပါနှိုးဆှအကြောင်းအရာဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုများအတွက်ဆုလာဘ်အဖြစ်ကြွလာ။ သင်သည်သင်၏ကြက်ကိုစိတ်ကြိုက်နှင့်သင်၏စွမ်းရည်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုဖွင့်ထားနှင့်သင်များသောအားဖြင့်လမ်းတစ်လျှောက်ကိုစုသိမ်းပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုသင်၏ဟေရှာယ၏အကြည့်သို့မဟုတ်လိင်ကျွမ်းကျင်မှုများအတွက်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျသွေးဆောင်ဖြားယောင်းသို့မဟုတ်အောင်နိုင်တစ်ချိန်ကဤအသစ်ကဂိမ်းအချို့အတွက်,သူမဂိမ်း၏အဆုံးတိုင်အောင်သူမ၏ဥစ္စာဖြစ်လိမ့်မည်., သင်သူမကိုလိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းသူမကသင့်ဟန်းနီးမွန်းမှာရှိနေပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျသစ်တစ်ခုဒိုင်းလွှားသို့မဟုတ်ဖန်စီထားကိုဝယ်ခြင်းငှါသူမ၏ရောင်းမဟုတ်လျှင်။
ညစ်ညမ်း၏ဂုဏ်အသရေကိုအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ကျနော်တို့အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်လိုကြော်ငြာ,စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး,ပေါ့ပ်တက်သို့မဟုတ်ပြန်ညွှန်းလင့်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်တွဲဖက်မည်မဟုတ်ကြောင်းစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးစေကြောင်းကြော်ငြာနှင့်အတူသဘောတူညီချက်ဒဏ်ခတ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲ။ ဒါကြောင့်,ကျနော်တို့နိမ့်ဆုံးမှကြော်ငြာများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ကြော်ငြာလူများကသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ကြသည်. အကယ်၍ကစားသမားများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှစ်ခုလုံးသည်ကြော်ငြာရှင်များနှင့်ဒဏ်ခတ်နိုင်သည့်ချိုမြိန်သောသဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါက၊ကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အရာကိုမသိပါ။ ရုံဒါကြောင့်သင်သိ၊ဆိုဒ်များလွန်းကြော်ငြာတွေရှိသည်အခါ၊သူတို့လိုအပ်သောကြောင့်သူတို့ရှိသည်၊သူတို့မြည်းကြောင့်မဟုတ်။, သို့သော်,ကျနော်တို့တထောင်အမြင်များအပေါ်တစ်ပြားမှမလိုအပ်ပါဘူး. ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်လာ,နည်းနည်းပိုပြီးမြင့်မားသောအရာတစ်ခုခုကိုခံစားခြင်းနှင့်ကြော်ငြာများကိုကြည့်ရှုသင်၏အချိန်နှင့်အတူပေးဆောင်မ.